Archive du 20190114
Marc Ravalomanana Tsy adinon’ireo manamboninahitra niara-niasa taminy
Tonga niarahaba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teny Faravohitra ireo manamboninahitra niaraka niasa taminy teo aloha ny sabotsy teo.
Fianianan-dRajoelina Mifono zavatra hafahafa
Raha araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-48 mikasika ny fandraisam-pahefan’ny filoham-pirenena vaovao ao amin’ny lalàmpanorenana Malagasy dia manao fianianana eo anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka ny filoham-pirenena vaovao mialoha ny tena handraisany ny fahefany.
Fianianana manifika ny maha Kristianina Miandry ny hevitry ny FFKM ny rehetra
Ho avy sa tsy ho avy eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina ireo filoham-piangonana efatra mirahalahy eo anivon’ny fiombonan’ny fiangonana Kristianina eto Madagasikara na FFKM ?
Depiote Jocelyne Rahelihanta “Ny kolikoly no fototry ny ratsy rehetra.”
Nitaky foana ny tsy hisian’ny kolikoly intsony izahay, hoy ny depiote Jocelyne Rahelihanta.
Rivo Rakotovao « Fitaratra amin’ny fanompoana vahoaka ny manamboninahitra »
Isaky ny 12 janoary no fotoana hanamarihana ny andron’ny manamboninahitra, fotoana hanehoan’izy ireo ny firaisankina sy ny fiombonana.
Miandry ny fijoroan’ny governemanta ny mpisehatra politika, ny firahamonim-pirenena…
Minisiteran’ny fampihavanam-pirenena Miandry ny fananganana azy ny CRN
Fifidianana solombavambahoaka Hatao ny volana aogositra 2019 ?
Araka ny voalaza ao anatin’ny lalàna mifehy ny fifidianana dia 90 andro mialoha ny fifidianana no tokony hivoaka ny didy fiantsoana ny mpifidy hanatanteraka ny adidiny.
Hery Rajaonarimampianina Nankasitraka ny fihetsiky ny filoha Ravalomanana
Niarahaba ny filoham-pirenena vaovao, Andry Rajoeilina, ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny fanambarana nataony araka ny valim-pifidianana farany navoakan’ny HCC.
Marc Ravalomanana Hanana olona ao anaty governemanta sa tsia ?
Aorian’ny fianianana sy ny fifamindram-pahefana ny 19 janoary vao tena handray ny fahefana feno maha filoha azy i Andry Rajoelina. Samy miandry izay hafitsoky ny fitondrany ny rehetra.
Fikambanan’ny teraky ny faritanin’Antsiranana Efa manaitaitra sahady an’i Andry Rajoelina
Nitodika sahady tamin’ny filoham-pirenena vaovao ny fikambanan’ny teraky ny faritanin’Antsiranana ny amin’ny fanatanterahana ireo tetikasam-pandrosoana nandritra ny fampiarahabana nahatrarana ny taona 2019 tamin’ny herinandro farany teo tetsy amin’ny Hotely Le Louvre Anataninarenina.
Taratasin’I Jean Oui mse!!
Inona moa izany ry Jean fa dia mbola hitohy lava be indray ny Oui mse koa ! Ary tena miha mahery vaika ilay izy a ! Mbola ho zakanao ihany ve ?